Ogaden News Agency (ONA) – 30-Guuradii Asaaska JWXO oo si Weyn Looga Xusay Xrada Qaxootiga ee Dhagaxlay – Dhagayso qayba ka mid ah
30-Guuradii Asaaska JWXO oo si Weyn Looga Xusay Xrada Qaxootiga ee Dhagaxlay – Dhagayso qayba ka mid ah
Posted by ONA Admin	/ August 14, 2014
Manta oo ay taariikhdu kubeegantahay 14/08/14 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay munaasabada sanadguurada 30aad ee kasoo wareegtay aas’aaskii JWXO. Xaflada oo ahayd mid si wayn loosoo qaban qaabiyay ayaa waxaa kasoo qayb galay dhamaan xubnaha iyo taageerayaasha Jabhada ee kusugan xerada Dhagaxlay iyo marti sharaf aad ubadan oo kasoo kicitimay xeryaha dariska la ah Dhagaxlay ee Ifo iyo Xagardheere.
Xaflada ayaa bilaabatay 10:00 subaxnimo xiliga africada bari waxaana lagu furay sidii caadada ahayd wacdi diini ah oo uu soojeediyay sheikh maxamad irshaad oo kamid ah culimada ugu caansan xeryaha qoxootiga ee Dhadhaab. Sheekha ayaa kahadlay arimo aad ubadan wuxuuna siqoto dheer uga hadlay jihaadka faran dadka muslimiinta ah khaasatan jihaadka kasocda ogadenia ee lagula jiro ciidamada gumaysiga iyo dabar goynta ujooga ciida xalaasha ah ee Ogadenia.Sheekha ayaa si waafi ah uqeexay xugunka ay qaadanayaan kuwa gaalada raacay ee laynahay dadka shacabka ah ee s.ogadenia wuxuuna sheekhu xusay in aan laga shakiyaynin gaalnimadooda isagoo sooqaadanaya aayado uu Allaah S.W kaga hadlay iyo axaadiis uu rasuulku S.C.W kaga waramay wuxuna sheekhu ugu baaqay dadka muslimiinta ah ee kudhaqan Ogadenia in ay u istaagaan sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen gumaysiga kusoo duulay Diintooda Dadkooda iyo Dalkoodaba. Halkan ka dhagayso.
1. Sh m irshad
Intaas kdib waxaa goobta laga akhriyay taariikhda halganka Ogadenia oo kooban waxaana sifiican looga warbixiyay halgamadii faraha badnaa ee Ogadenia soomaray iyo sababihii keenay in ay fashilmaan waxaa kale oo laxusay sababta keentay in ay JWXO dagaalanto 30 sano. Taariikhda ayaa laga soobilaabay halgankii uu iimaam Axmad Guray lagalay xabashida iyo kacdoonkii Daraawiishta ee uu hogaaminayay Allaha unaxariistee sayid maxamad cabdulle xassan iyo halgankii uu 1963dii ee uu hogaaminayay Allaha unaxariistee Garaad makhtal Daahir iyo jabhadii WSLF oo iyadu qabatay inta badan dhulka Ogadenia waxaana taariikhda lagu xusay sababaha fashiliyay halgamadaas oo ahaa faragalin kaga imanaysay dibada iyo bisayl la’aantii shacabka soomaalida Ogadenia. Sidoo kale waxaa laxusay sababta keentay in ay JWXO dagaalanto mudada dheer waxaana laxusay in ay sababtu tahay halgan isku tashi ah in uuyahay waxa lagu tashadana uuyahay Allaah S.W iyo shacabka soomaalida Ogadenia
Intaas kadib waxaa laguda galay in makaroofanka lagu soodhaweeyo marti sharaftii shirka kasoo qaybgashay waxaana lagu soodhaweeyay halgame cabdi carab oo kasocday faraca muftaaxulxoriyo ee kadhisan xerada Ifo wuxuuna goobta kasoo jeediyay khudbad qiimo badan oo aad udheer waxaa sidoo kale lagu soodhaweeyay sh axmad sh xuseen oo kasocday faraca Iftin ee xerada Xagardheere wuxuu sidoo kale sheekhu soojeediyay khudbad aad looladhacay iyagoo labaduba salaam kawaday faracyadii ay kayimaadeen inta aan xaflada kasoo qayb galin.
Sidoo kale waxaa khudbado laladhacay soojeediyay mas’uuliyiin katirsan Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia.
Intaas kadib waxaa lookala dhexbaxay kooxda HILAAC ee xidigaha bariga Africa iyo dadwaynihii faraha badnaa ee madasha fadhiyay waxayna kooxdu soobandhigtay suugaan aad looga maqsuuday oo la-jaanqaadaysa wakhti xaadirkan iyagoo dadkii goobta fadhiyay ay waxbadan kabadaleen wuxayna xafladu isu badashay meel sacab iyo sawaxan uu isqabsaday iyagoo mararka qaara aad arkaysay dad ay ilintu kaqubanayso. Halkan Ka dhagayso:
2. Heeso hilaac
Sikastaba ha’ahaatee xafladii ayaa soogaba gabowday abaare 2:30 xiliga Dhagaxlay waxayna kusoo dhamaatay jawi aad udagan iyo farxad iyo salaam badan oo ay iswaydaar sanayeen xubnihii badnaa ee madasha isugu yimid